ဒါဂတ်စကာ | ခရီးသွားလမ်းညွှန် & ခရီးသွားအပန်းဖြေကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္တာ့ Viral စျေးကွက်အုပ်စု
ခရီးသွားလမ်းညွှန် & ခရီးသွားအပန်းဖြေကမ္တာ့ဆောင်းပါးများ WebSite.WS > ဒါဂတ်စကာ
မောရစ်ရှ – တစ်ဦးကရုပ်ပုံပြီးပြည့်စုံသောသဲသောင်ပြင်ကံကြမ္မာ
Mauritius has successfully managed to position itself as an exotic beach destination. With beach destinations so plentiful, this has been sustained not by mere hype, but by the substance there is to this claim. Visitors are drawn to Mauritius by the reputation of its 140 km of white sand beaches, and the superb opportunities for water sports. Swimming, beach combing, ရွက်လွှင့်ခြင်း, surfing, ယပ်လှေလှော်ခြင်း, diving and deep-sea fishing - there isasport for almost everyone.
ကဝန်ခံ. သင်ပထမဦးဆုံးအခရုဇ်ကိုယူခင်မှာ, ခရုဇ်သင်္ဘောများနှင့်အပျော်စီးအားလပ်ရက်အကြောင်းကိုသင်တို့၏အကြံအစည်မတ်ေတာသညျလှေ Re-ပြေးဖို့ flashbacks ပါဝင်သည်. ဒီလိုမြင်ကွင်းအားလုံးအကြောင်းကိုနေသာခဲ့, ဘာမြူဒါတူသောအပူပိုင်းနေရာများ, မက္ကစီကိုနှင့်ဟာဝိုင်ယီ. ခရုဇ်သင်္ဘောအားဖြင့်ခရီးသွားလာအရင်ကထက်ပိုပြီးရေပန်းစားသည်ကတည်းက, ယင်း၏တတ်နိုင်မှကျေးဇူးတင်စကား, သငျသညျသူတို့သာနေသာနေရာများမှဒါပေမယ့်လည်းဟောင်ကောင်နှင့်တူပိုပြီးပုံမှန်မဟုတ်သောဆိပ်ကမ်းများမသွားနိုင်, alaska, နော်ဝေနှင့်အမေဇုန်မြစ်. ဆဲ, အမြောက်အများ ...
Survivorman – တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အဆိုပါ Luxor တွေ့ကြုံ
သမိုင်းခုနှစ်တွင် San Diego မှချမ်းသာတဲ့, ကြည့်ရှုပါထိုအပြုပါရန်အမှုအရာ
သမုဒ္ဒရာသဲသောင်ပြင် San Diego မှ
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် Songkran အခမ်းအနားကျင်းပ
မော်လ်တာ – အဆိုပါ Timeshare ကိုယ်စားလှယ်များကိုဖြေရှင်းရန်
ထိပ်တန်း 10 သင်ကမော်လ်တာရန်တစ်ဦးကအားလပ်ရက်ဘွတ်ကင်လုပ်ရန်သင့်သအဘယ်ကြောင့်အကြောင်းရင်းများ
မင်္ဂလာပါသြစတြီးယားကနေ: အဆိုပါ Riegersburg ခံတပ်ထိုအ Styria ရဲ့မီးတောင်တိုင်းဒေသကြီးရှာဖွေရေးငါမှာအလယ်ခေတ်သမိုင်း Up ကို Close ကို